Ama esịn Broken
M chọrọ na-ere Ọ
BUSTED akụkụ OTÚ ISIOKWU
Olee otú Lelee Ọ bụrụ na gị na iPhone bụ na mmiri ndị mebiri emebi ma ọ bụ na
Bụ gị iPhone n'ezie mmiri mebiri emebi? Ọ bụrụ na ị bụghị n'aka banyere ya, ị nwere ike ịlele ya site onwe gị n'ezie - site achọpụta na gị iPhone si mmiri mmiri egosi. Ị nwere ike ịlele ha na ebe dị ka e gosiri na foto n'okpuru. Mgbe gị iPhone e gụrụ mmiri, ị ga-ahụ a red ntụpọ. Ọ bụrụ na, ekele! Gị iPhone na-adịghị mmiri mebiri emebi.
Cheta na: cheta agbanyụ gị iPhone mgbe ị na-ego mmiri mmiri egosi na gị na iPhone.
Common Mgbaàmà nke iPhone Mmiri Mebiri:
Mmiri na ndị ọzọ liquids nwere ike imebi gị iPhone mfe. N'ụzọ dị mwute, Apple si akwụkwọ ikike anaghị ekpuchi mmiri mmiri mebiri. Nke ahụ bụ ikwu, sị, na ị na-ahụ maka ya mgbe gị iPhone mebiri emebi site na mmiri ma ọ bụ ndị ọzọ liquids. Lezienụ gị iPhone pụrụ-emebi site na mmiri n'ụwa? Ọzọ, ka anyị lee ihe ụfọdụ na-mgbaàmà ọnụ.
Ike na-amalite na-elu mbipụta: enweghị ike gbanye, Malitegharịa ekwentị ozugbo mgbe mbịne na, ma ọ na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ.
Hardware odida: Ọkà okwu adịghị arụ ọrụ, okwu bụ ndị nwere nkwarụ, ma ọ bụ gị iPhone na-ekpo oke ọkụ.
Ozi ịdọ aka ná: i nwere ike inwe otu ma ọ bụ karịa njehie ozi mgbe ị na-eji iPhone, dị ka "a na-ngwa na-adịghị mere-arụ ọrụ na iPhone" ma ọ bụ "Nchaji na-anaghị akwado na a na-ngwa.", Wdg
Ngwa mbipụta: Safari nchọgharị, email na ndị ọzọ omume oghere na mmechi spontaneously.
Ihe Ị Pụrụ Ime Na A Mmiri mebiri emebi iPhone
# 1. Ike anya gị iPhone ozugbo
Mgbe gị iPhone e mmiri mebiri emebi, anaghị eji ya ka nkịtị, o nwere ike na-esi gị iPhone ekpo oke ọkụ mgbe e mesịrị na imebi gị iPhone si ngwaike. Dị nnọọ na-esi gị iPhone efep mmiri na ike ya anya ozugbo.
# 2. Adịghị nkụ ya a draya ntutu
Anwala nkụ mmiri gị mebiri emebi iPhone na a draya ntutu ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga ihicha igwe. Nke a nwere ike ịmanye mmiri miri n'ime gị iPhone. Ị nwere ike ịhọrọ-etinye ya na a akpa nke uncooked osikapa maka ụbọchị ole na ole nkụ ya, ma ọ bụ were ya na-ka mgbidi ụlọ ahịa.
Rịba ama: Mgbe ị na-eme atụmatụ na-esi gị mmiri mebiri emebi iPhone rụziri, e nwere a zuru ndepụta n'ihi na ị na-ahọrọ ụzọ kasị mma n'ihi na gị iPhone.
# 3. Ndabere gị iPhone data
Mgbe gị iPhone na-mịrị amị, ihe mbụ ị na chọrọ ime na-akwado ihe data na gị iPhone. Ọ bụrụ na ị nwere ike iji iTunes ma ọ bụ iCloud iji nweta ya kwadoo, dị nnọọ na-eme ya n'ihu ị na-eme a zuru nnyocha na gị iPhone. Ị Aga mgbe ihe ga-eme n'ọdịnihu.
Ndabere gị iPhone site iTunes: Jikọọ gị iPhone na-agba ọsọ iTunes. Mgbe ahụ nri pịa gị iPhone aha ma họrọ "ndabere". iTunes nwere ike ndabere gị iPhone na a nkeji ole na ole.
Ndabere gị iPhone site iCloud: Gaa na Ntọala> iCloud (ịrịba ama na ebe a ma ọ bụrụ na ị na-si)> Back Up Ugbu a.
Ndabere gị iPhone na Dr.Fone maka iOS
Ọ bụrụ na ị nwere ike ọ bụghị ndabere gị mmiri mebiri emebi iPhone na iTunes ma ọ bụ iCloud, atụla egwu. Ọ bụ nkịtị. Mgbe ụfọdụ, iPhone kwesịrị a weghachi ime onwe-nchebe. N'okpuru ọnọdụ a, i nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery), nke-enye gị ohere kpọmkwem iṅomi gị iPhone iji nweta niile data n'ime ya. E nwere ndị dị otú ahụ a ohere. Gịnị mere enweghị a na-agbalị? The ikpe mbipute n'okpuru bụ free.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na ike iṅomi ya
Mbụ, wepuÚ iTunes ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa na-agba ọsọ Dr.Fone maka iOS. Mgbe gị iPhone ahụrụ, ị ga-ahụ na windo dị ka e gosiri na nri.
Rịba ama: Ọ bụrụ na nke a adịghị arụ ọrụ, n'ihi na iPhone 4 na iPhone 3GS ọrụ, ị nwere ike na-agbalị iji "Advanced Mode" site na bọtịnụ na ala nke window. Ọ na-enye gị ụzọ ọzọ na-gị iPhone scanned, ọbụna mgbe gị iPhone gbanyuo.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake data gị mmiri mebiri emebi iPhone
Mgbe iṅomi bụ zuru ezu, ị nwere ike ịhụchalụ niile data hụrụ na ọ otu otu na Doppler N'ihi. Mgbe ahụ họrọ ihe ọ bụla ihe ị chọrọ ịnọgide na, na pịa na "Naghachi" button na-azọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Cheta na: Ọ bụghị nanị na ẹdude data na gị mmiri mebiri emebi iPhone, ọ na-nwere ike ịhụ furu efu data (gosiri na red) si gị iPhone.
# 4. Naghachi Data si iTunes / iCloud ndabere
Tụlee kasị njọ n'ihi: mmiri mebiri emebi iPhone-apụghị rụziri na unu ghara inwe ike data na ya. Gịnị ka anyị pụrụ ime? Ọ bụrụ na ị mgbe nwere iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere, ị ka nwere ike inwe gị aga na data, ọbụna na ị na-adịghị na-eme atụmatụ na-azụta ọhụrụ iPhone. Olee otú? Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) bụ ka bara uru. Ọ na-ahapụ gị wepụ niile data si ndabere faịlụ ma ị nwere ike selectively ịhụchalụ na mbupụ ọ bụla ị chọrọ.
Naghachi iPhone data si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1. Họrọ "naputa site na iTunes ndabere faịlụ" mgbe launching Dr.Fone maka iOS.
Nzọụkwụ 2. Ị ga-ahụ niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị ebe a. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa na "Malite iṅomi" button iji nweta ya amịpụtara.
Nzọụkwụ 3. Mgbe adịrị dị n'elu, ị nwere ike ihuchalu niile data na selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ ka gị na kọmputa.
Naghachi iPhone data si iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1. Turn ka "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" n'elu nke usoro ihe omume si window.
Nzọụkwụ 2. Abanye gị iCloud akaụntụ na-ahọrọ ndabere maka gị iPhone. Mgbe ahụ na ibudata ya.
Nzọụkwụ 3. Mgbe download, ị nwere ike iṅomi wepụ ya, na mgbe ịhụchalụ na-agbake ọ bụla ị chọrọ site na nkwado ndabere na mpaghara gị na kọmputa.
Olee otú na-ere iPhone maka a Mma Ahịa
Nchọpụta nsogbu maka Nhichapụ iPhone Files
Olee otú Dochie Broken iPhone 5s / 5c / 5 ihuenyo